MUQDISHO: Khasaare Laxaad Leh Oo Ka Dhashay Weerar Al-shabaab Ku Qaadday Baar Ku Yaalla Xeebta Liido | Berberatoday.com
MUQDISHO: Khasaare Laxaad Leh Oo Ka Dhashay Weerar Al-shabaab Ku Qaadday Baar Ku Yaalla Xeebta Liido
Muqdisho(Berberatoday.com)-Ugu yaraan 10-ruux ayaa ku geeriyooday tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen weerar Xalay kooxo ka tirsan Al-shabaab ay ku qaadeen Banaadir Beach oo ka mid ah Huteellada wax laga cuno ee ku yaalla Xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Amniga Dowladda Somalia ayaa soo Gaba-gabeeyay Hawlgalka, iyagoo xusay in la dilay kooxihii weerarka soo qaaday, marka laga reebo mid ka mid ah kooxahan oo gacanta lagu dhigay.
Taliyaha booliska gobolka Banaadir, Col. Bishaar Abshir Geeddi oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada gaarka ah ee dowladda ay gudaha u galeen makhaayada, isla- markaana ammaanka ay xaqiijiyeen.
“Ciidanka Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda (Gelinkii hore Maanta) ku sugan gudaha baarka, kooxihii soo qaaday weerarkana waa la laayay, xaalada amaanku way wanaagsan tahay,” ayuu taliyuhu u sheegay Warbaahinta.
Dhanka kale, Taliyaha ayaa xusay in dadka dhintay ay ku jiraan laba askari iyo shan qof oo shacab ah. Wuxuuna xusay in mid ka mid ah dableydii soo qaaday Weerarka la hayo isagoo dhaawac ah.
Weerarka Al-shabaab ku qaadday Baarka Banaadir, ayaa ku bilaabmay Qaraxyo iyo Rasaas Toos ah.